ဒီလူက ဘယ်သူလဲ။ | Worldwide Church of God Switzerland | Worldwide Church of God Switzerland ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > သားအ > ဤသူသည်ကားအဘယ်သူနည်း
ယေရှုကိုယ်တိုင်တပည့်တော်များအားမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမေးခဲ့သည်။ ဤတွင်“ လူသားသည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုလူများတို့သည်ဆိုကြသနည်း” ဟူသည့်ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးဂရုပြုသင့်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်လည်းသက်ဆိုင်နေဆဲ - ဤသူကားမည်သူနည်း။ သူ၌အဘယ်အခွင့်အာဏာရှိသနည်း။ ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်ကြောင့်ယုံကြည်သင့်သနည်း။ ယေရှုခရစ်သည်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှု၏ဗဟိုတွင်ရှိသည်။ သူဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာငါတို့သိဖို့လိုတယ်။
လူအားလုံး - နှင့်ပိုပြီး
သခင်ယေရှုသည် ပုံမှန်မွေးဖွားခြင်း၊ ပုံမှန်ကြီးပြင်းလာခြင်း၊ ဆာလောင်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ စားသောက်ခြင်း၊ သူသည် ပုံမှန်အတိုင်း၊ ဘန်းစကား ပြောတတ်သည်၊ ပုံမှန်အတိုင်း သွားလာနေပါသည်။ သနားခြင်း၊ ဒေါသ၊ အံ့သြခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း (မ. 9,36; လု 7,9; ယော 11,38; Matt. ၂6,37) သူသည် လူသားများအလိုအတိုင်း ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းခဲ့သည်။ သူ့ကိုယ်သူ ယောက်ျားလို့ ခေါ်ပြီး ယောက်ျားလို့ ခေါ်တယ်။ သူသည် လူသားဖြစ်သည်။
သို့သော် သူသည် အလွန်ထူးခြားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ၏ နန်းတက်ပြီးနောက် အချို့က သူသည် လူသားမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့သည်။2. ယော ၇)။ အညစ်အကြေးများ၊ ချွေးများ၊ အစာခြေလုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသား၏မစုံလင်မှုများနှင့် ဘာမှမဆိုင်ဟု ယေရှုကို သန့်ရှင်းသည်ဟု သူတို့ယူဆကြသည်။ တခါတရံ ကောင်းကင်တမန်များသည် လူသားအဖြစ် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာခြင်းမရှိဘဲ လူသားအဖြစ် ပေါ်လာသကဲ့သို့ သူသည် လူသားအဖြစ် “ပေါ်လာ” ရုံမျှသာ ဖြစ်နိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ဓမ္မသစ်ကျမ်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်- ယေရှုသည် နှုတ်ကပတ်တော်၏အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော လူသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယောဟန်ဤသို့အတည်ပြုသည်– “နှုတ်ကပတ်တော်သည် အသားဖြစ်၏…” (ယော. 1,14) ဇာတိအဖြစ်သာ “ထင်ရှား” သည်မဟုတ်၊ ဇာတိပကတိနှင့်သာ “၀တ်” တော်မမူ။ အသားတွေဖြစ်လာတယ်။ ယေရှုခရစ်သည် “ဇာတိပကတိအားဖြင့်ကြွလာ” (1. ဂျို 4,2) Johannes က သူ့ကိုမြင်ပြီး ထိမိတဲ့အတွက် ငါတို့သိတယ် (1. ဂျို 1,1-2) ။
ပေါလု၏အဆိုအရ ယေရှုသည် “လူကဲ့သို့” ဖြစ်ခဲ့သည် (ဖိ. 2,7) “တရားဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်တယ်” (ဂလ. 4,4) “အပြစ်ရှိသောအသား၏သဏ္ဍာန်” (ရော. 8,3) လူသားကို ရွေးနှုတ်ရန် ကြွလာသူသည် အခြေခံအားဖြင့် လူသားဖြစ်လာရမည်ဟု ဟေဗြဲစာရေးဆရာက ဤသို့ဆိုသည်– “ကလေးများသည် အသွေးအသားရှိသောကြောင့် ၎င်းကိုလည်း ညီတူညီမျှလက်ခံသည်… ထို့ကြောင့် သူသည် အရာရာ၌ ညီအစ်ကိုများကဲ့သို့ ဖြစ်ရမည်” (2,14-17) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းသည် ယေရှု အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ လူသားဖြစ်သည်ဖြစ်စေ တည်ရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၏အခန်းကဏ္ဍသည် အမှန်တကယ် လူသားအတွေ့အကြုံရှိမရှိအပေါ် မူတည်သည် (ဟေဗြဲ)။ 4,15) ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်တွင်ပင်၊ ယေရှုသည် အမဲသားနှင့်အရိုးများရှိခဲ့သည် (ယော၊ ၂၀း၂၇၊ လုကာ ၂။4,39) ကောင်းကင်ဘုန်းကြီး၌ပင် လူသားအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။1. တိ 2,5).
“သူက ဘယ်သူလဲ” လို့ ဖာရိရှဲတွေက ယေရှုရဲ့ အပြစ်တွေကို ခွင့်လွှတ်တာကို မျက်မြင်တွေ့တဲ့အခါ မေးတယ်။ “ဘုရားသခင်မှတပါး အပြစ်ကို အဘယ်သူ လွှတ်နိုင်သနည်း။” (လု. 5,21.) အပြစ်သည် ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားခြင်းဖြစ်သည်။ လူသည် ဘုရားသခင်အတွက် မည်ကဲ့သို့ပြော၍ သင်၏အပြစ်များကို ပြေပျောက်စေပြီဟု မည်သို့ပြောနိုင်မည်နည်း။ ဤသည်မှာ ကဲ့ရဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ သခင်ယေရှုသည် ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သူတို့မည်သို့ခံစားရသည်ကို သိရှိပြီး အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ဆဲဖြစ်သည်။ သူ့ကိုယ်သူ အပြစ်ကင်းသည်ဟုပင် ညွှန်ပြခဲ့သည် (ယော. 8,46).
ယေရှုက သူသည် ကောင်းကင်ဘုံရှိ ဘုရားသခင်၏လက်ယာတော်ဘက်တွင် ထိုင်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်—ဂျူးယဇ်ပုရောဟိတ်များ၏ စော်ကားပြောဆိုမှုနောက်တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည် (မ.6,6၃-၆၅)။ သူသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်၊ အကြောင်းမှာ ထိုယဉ်ကျေးမှုတွင် ဘုရားသခင်ထံ မိမိကိုယ်ကို ချီးမြှောက်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသောကြောင့် (ယော. 5,18; 19,7) သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်အလိုရှိသောအရာကိုသာ လုပ်ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်နှင့် ပြီးပြည့်စုံသောသဘောတူကြောင်း အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည် (ယော. 5,19) ခမည်းတော်နှင့် တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။10,30ယုဒယဇ်ပုရောဟိတ်များကလည်း ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသည်ဟု ယူဆကြသည်၊10,33) မြင်သူတိုင်း ခမည်းတော်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက် ဘုရားနဲ့တူတယ်လို့ သူပြောခဲ့တယ်။ (က4,9; 1,18) ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်ကို စေလွှတ်နိုင်သည်ဟု သူဆိုခဲ့သည် (က6,7) ကောင်းကင်တမန်များကို စေလွှတ်နိုင်မည်ဟု အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည် (မ. ၁3,41).
ဘုရားသခင်သည် ဤလောက၏တရားစီရင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို သူသိပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ဘုရားသခင်သည် သူ့အား တရားစီရင်ခြင်းကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း (ယော. 5,22) သူကိုယ်တိုင်အပါအဝင် လူသေတွေကို ထမြောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ (ယော. 5,21; 6,40; 10,18) လူတိုင်း၏ထာဝရအသက်သည် ယေရှုနှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးပေါ်တွင်မူတည်သည်ဟု သူကဆိုသည်။ (မ. 7,22စာ-၂၃)။ မောရှေ၏စကားများကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု သူထင်ခဲ့သည် (မ. 5,21စာ-၄၈)။ ဥပုသ်နေ့၏ အရှင်သခင်ဟု မိမိကိုယ်ကို ကြွေးကြော်ခဲ့သည်—ဘုရားသခင့် ပညတ်တရားဖြစ်သည်။ (မဿဲ ၁2,8.) သူသည် “လူသားတစ်ဦးတည်း” ဖြစ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသည် ဂုဏ်ယူစရာ၊ အပြစ်ရှိသော သွန်သင်ချက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
သို့သော် ယေရှုသည် သူ၏စကားများကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အလုပ်များဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုခဲ့သည်။ “ငါသည် ခမည်းတော်၌ရှိ၍ ခမည်းတော်သည် ငါ၌ရှိတော်မူကြောင်းကို ယုံကြလော့။ မဟုတ်လျှင် အကျင့်ကိုထောက်၍ ငါ့ကိုယုံလော့” (ယော.၁)4,11) အံ့ဖွယ်အမှုများသည် မည်သူ့ကိုမျှ ယုံကြည်ရန် အတင်းအကျပ်မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ခိုင်ခံ့သော "အခြေအနေဆိုင်ရာ အထောက်အထား" ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သော အခွင့်အာဏာရှိကြောင်း ပြသရန် ယေရှုသည် လက်ခြေသေသောသူကို ကုသပေးခဲ့သည် (လုကာ ၅း၁၇-၂၆)။ သူ၏ အံ့ဖွယ်အမှုများက သူ့အကြောင်း သူပြောခဲ့သည်များ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြသည်။ သူသည် လူသားထက် သာလွန်သောကြောင့် သူသည် လူသားထက် သာလွန်သည်။ အခြားသူများ၏ ပုတ်ခတ်စော်ကားမှု—မိမိကိုယ်ကိုတိုင် အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများသည် ယေရှု၏အမှန်တရားအပေါ် အခြေခံထားသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ပြောဆိုနိုင်ပြီး ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ပြုမူနိုင်သောကြောင့် သူသည် လူ့ဇာတိ၌ရှိသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိခဲ့သည်။ တစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်သားမှစ၍ ကောင်းကင်ခမည်းတော်နှင့် အထူးဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ (လု. 2,49) ဗတ္တိဇံ​ခံ​တဲ့​အခါ၊ မင်း​ဟာ ငါ့​ချစ်​သား​ဖြစ်​တယ်​လို့ ကောင်းကင်​က​ပြော​တဲ့ စကား​သံ​ကို ကြား​တယ်။ (လု. 3,22) ပြီးမြောက်ဖို့ တာဝန်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။ (လု. 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).
ယေရှုသည် ပေတရု၏စကားကို “ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်တည်းဟူသော အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူ၏” ဟုဖြေကြားခဲ့သည်– “ယောန၏သား ရှိမုန်၊ အကြောင်းမူကား၊ အသွေးအသားသည် ဤအရာကို သင်တို့အား မဘော်ပြဘဲ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်မှတပါး၊” (မဿဲ ၁၆း၁၆-၁၇)။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်။ သူသည် ခရစ်တော်၊ မေရှိယဖြစ်သည် - အလွန်ထူးခြားသောမစ်ရှင်အတွက် ဘုရားသခင်က ဘိသိက်ပေးခဲ့သည်။
တကျိပ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှ၊ aboveသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ထက် သာ၍ မြင့်သောကြောင့်၊ သူသည်Israelသရေလလူမျိုးသစ်ကိုဖန်တီးသူနှင့်တည်ဆောက်သူဖြစ်သည်။ စက္ကမင်မင်္ဂတွင်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုပcovenantိညာဉ်သစ်၏အခြေခံ၊ ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးအသစ်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘုရားသခင်ပြုလုပ်နေသည့်အရာ၏အဓိကအချက်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။
ယေရှုသည်ထုံးတမ်းစဉ်လာများ၊ ဥပဒေများ၊ ဗိမာန်တော်နှင့်ဘာသာရေးအာဏာပိုင်များကိုဆန့်ကျင်စွာရဲရင့်စွာတိုင်ကြားခဲ့သည်။ အရာရာကိုစွန့်လွှတ်ပြီးကိုယ်တော့်နောက်လိုက်ဖို့၊ သူ့ဘဝမှာသူ့ကို ဦး စားထားဖို့၊ ကိုယ်တော့်အပေါ်လုံးဝသစ္စာရှိဖို့တပည့်တွေကိုကိုယ်တော်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ သူသည်ဘုရားသခင်၏အခွင့်အာဏာနှင့်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အာဏာနှင့်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဓမ္မဟောင်း ပရောဖက်ပြုချက်များ ပြည့်စုံလာသည်ဟု ယေရှု ယုံကြည်ခဲ့သည်။ သူသည် လူသားတို့၏ အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ရန် အသေခံမည့် ဆင်းရဲဒုက္ခခံကျွန်ဖြစ်သည် (ဟေရှာ၊ ၅3,4-5 & 12; Matt. ၂6,24; မှတ်သားပါ။ 9,12; လု ၂2,37; ၂၄း၄၆)။ သူသည် မြည်းကိုစီး၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်ရမည့် ငြိမ်သက်ခြင်း၏မင်းသားဖြစ်သည် (ဇာ. 9,9စာ-၁၀; Matt. ၂1,1စာ-၉)။ တန်ခိုးနှင့် အခွင့်အာဏာရှိသမျှတို့ကို အပ်နှင်းအပ်သော လူသားဖြစ်တော်မူ၏။ (ဒံ. 7,13စာ-၁၀; Matt. ၂6,64) ။
သခင်ယေရှုသည် အာဗြဟံ၏ရှေ့မှောက်တွင် အသက်ရှင်ခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုခဲ့ပြီး ဤ “အချိန်မရှိခြင်း” ကို ဂန္ထဝင်စကားစုတွင် “ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ အာဗြဟံမဖြစ်မီက ငါဖြစ်သည်” (ယော. 8,5၈)။ တဖန်၊ ဂျူးယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ယေရှုသည် ဘုရားရှိသောအရာများကို သိမ်းပိုက်ပြီး ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ချင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည် (း၅၉)။ "ငါပါ" ဟူသော စကားစုတွင် အသံထွက်သည်။ 2. ကြွက် 3,14 ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား သူ၏အမည်ကိုဖော်ပြရာ– “ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ဤသို့ပြောရမည်– 'ငါဖြစ်၏' ဟုသင်တို့ရှိရာသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီ” (Elberfeld ဘာသာပြန်)။ ယေရှုသည် ဤအမည်ကို ဤနေရာ၌ သူ့ကိုယ်သူယူ၍ “ဤလောကမဖြစ်မီ” တွင် ခမည်းတော်အား ဘုန်းထင်ရှားစေတော်မူကြောင်းကို ယေရှုအတည်ပြုခဲ့သည် (ယော၊ ၁။7,5) နှုတ်ကပတ်တော်သည် အချိန်ကာလအစမှ တည်ရှိခဲ့ကြောင်း ယောဟန်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသည်။ (ယော. 1,1).
“ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို” နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဖန်ဆင်းကြောင်း ယောဟန်တွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်နိုင်သည်။ (ယော. 1,3) ခမည်းတော်သည် အစီအစဉ်ရေးဆွဲသူ၊ နှုတ်ကပတ်တော် ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပြီး အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်သူဖြစ်သည်။ သူ့အတွက်ရော သူ့အတွက်ပါ အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တာ (ကော. 1,16; 1. ကော။ 8,6) ဟီး 1,2 ဘုရားသခင်သည် သားတော်အားဖြင့် “ဤလောကကို” ဖန်ဆင်းသည်ဟုဆိုသည်။
ဟေဗြဲဘာသာတွင်၊ ကောလောသဲကျမ်းတွင်ကဲ့သို့ပင်၊ သားတော်သည် စကြဝဠာကို “သယ်ဆောင်” ကာ သူ့အထဲ၌ “တည်ရှိ” သည်ဟု ဆိုထားသည်။ 1,3; ဗိုလ်မှူးကြီး 1,17) ကိုယ်တော်သည် “မျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်” ဖြစ်သည် (ကော. 1,15) “သူ၏သဏ္ဍာန်” (ဟေဗြဲ၊ 1,3).
ယေရှုက ဘယ်သူလဲ။ သူသည် လူ့ဇာတိခံယူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ သူသည် အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်းရှင်၊ အသက်၏မင်းသားဖြစ်သည် (Acts of the Apostles) 3,15) သူသည် ဘုရားသခင်နှင့်တူသည်၊ ဘုရားသခင်နှင့်တူသော ဘုန်းကြီးသည်၊ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာရှိသော ကြွယ်ဝသောတန်ခိုးရှိသည်။ ဇာတိပကတိ၌ရှိသော ဘုရားသခင်၊
ယေရှု၏သန္ဓေတည်ခြင်းသည် အံ့ဖွယ်နည်း။ (မ. 1,20; လု 1,35) အပြစ်မရှိဘဲ အသက်ရှင်နေ၏။ (ဟေဗြဲ၊ 4,15) အပြစ်မရှိ၊ 7,26; 9,14) အပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့။1. ပေတရု။ 2,22); သူ့၌ အပြစ်မရှိ၊1. ဂျို 3,5); မည်သည့်အပြစ်ကိုမျှ မသိ။2. ကောရိန္သု 5,21) မည်မျှပင် ပြင်းထန်ပါစေ၊ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ကို နာခံလိုသော စိတ်ဆန္ဒ အမြဲရှိခဲ့သည်။ သူ၏တာဝန်မှာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ (ဟေဗြဲ၊10,7).
လူတို့သည် ယေရှုကို အကြိမ်များစွာ ကိုးကွယ်ကြသည် (မ4,33; 28,9 & 17; ယော 9,38) ကောင်းကင်တမန်များကို မကိုးကွယ်နိုင် (ဗျာ၊ ၁9,10) ဒါပေမယ့် ယေရှုက ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ မှန်ပါသည်၊ ကောင်းကင်တမန်များပင်လျှင် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ကိုးကွယ်ကြသည် (ဟေဗြဲ)။ 1,6) အချို့သောဆုတောင်းချက်များကို ယေရှုထံ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ခဲ့သည် (တ.7,59-60; 2. ကောရိန္သု ၁2,8; ဗျာဒိတ်တော် ၂2,20).
ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် ဘုရားသခင်အတွက် ပုံမှန်သီးသန့် ဖော်မြူလာများကို အသုံးပြု၍ ယေရှုခရစ်အား ထူးထူးခြားခြား ချီးမွမ်းထောပနာပြုသည်– “ကိုယ်တော်သည် ကမ္ဘာအဆက်ဆက် ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်"(2. တိ 4,18; 2. ပေတရု။ 3,18; ဗျာဒိတ်တော် 1,6) ပေးအပ်နိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးသော အုပ်ချုပ်မှုဘွဲ့ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည် (ဧ. 1,20စာ-၂၁)။ သူ့ကို ဘုရားသခင်ဟု ခေါ်ခြင်းသည် ချဲ့ကားလွန်းသည်မဟုတ်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်နှင့် သိုးသငယ်အား တန်းတူရည်တူ ချီးမွမ်းကြသည်– “ပလ္လင်တော်ပေါ်ထိုင်တော်မူသော သိုးသငယ်အား ချီးမွမ်းဂုဏ်အသရေ၊ ဘုန်းအသရေ၊ အခွင့်အာဏာသည် အစဉ်အမြဲရှိပါစေသော” (ဗျာ. 5,13) သား​ကို​လည်း ဖခင်​အဖြစ်​ချီး​မြှောက်​ရ​မယ်။ (ယော. 5,23) ဘုရားသခင်နှင့် ယေရှုကို အရာအားလုံး၏အစနှင့် အဆုံးဟူ၍ အညီအမျှ အလဖနှင့် အိုမီဂါဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြသည် (ဗျာ. 1,8 u. 17; ၁1,6; 22,13).
အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုမှာ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဤကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်သည်။
“ထိုကြောင့်၊ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်သည် သခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို ကောင်းကင်မြေကြီးအောက်၌ ရှိသမျှသောလျှာရှိသမျှတို့သည် ဒူးထောက်လျက်၊ ယေရှု၏နာမတော်၌ ဒူးထောက်လျက်၊ ယေရှုခရစ်သည် သခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို အသီးသီးဝန်ခံစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည်လည်း ထိုသူကို ချီးမြှောက်၍၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခြင်းငှာ” (ဖိ. 2,9စာ-၁၁; ဟေရှာယထံမှ ကိုးကားချက်ဖြစ်သည်။ ၄5,23 ပါဝင်သည်)။ ဟေရှာယသည် ဘုရားသခင်နှင့် ကိုက်ညီသင့်သော ဂုဏ်အသရေနှင့် ရိုသေမှုတို့ကို ယေရှု အသိအမှတ်ပြုသည်။
ကယ်တင်ရှင်တစ်ဆူတည်းသာရှိသည်ဟု ဟေရှာယဆိုသည်– ဘုရားသခင် (ဟေရှာ. ၄၃:၁၁; ၄ ကော5,21) ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပြီး ယေရှုသည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားသည်။ (တိ. 1,3; 2,10 နှင့် ၁၃)။ ကယ်တင်ရှင် သို့မဟုတ် နှစ်ဦးရှိပါသလား။ အစောပိုင်းခရစ်ယာန်များက ခမည်းတော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီး ယေရှုသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာရှိပြီး ထို့ကြောင့် ကယ်တင်ရှင်တစ်ဆူတည်းသာရှိသည်ဟု ကောက်ချက်ချကြသည်။ ခမည်းတော်နှင့် သားတော်သည် အခြေခံအားဖြင့် တစ်ဆူတည်း (ဘုရားသခင်) ဖြစ်သော်လည်း မတူညီသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။
အခြားသော ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုဒ်အချို့ကိုလည်း ယေရှုဘုရားဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ ယော 1,1: “ဘုရားသခင်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်မူ၏။” အခန်းငယ် ၁၈– “ဘုရားသခင်ကို အဘယ်သူမျှ မမြင်ဖူးပါ။ ခမည်းတော်၏ရင်ခွင်၌ရှိသော တစ်ပါးတည်းသောသားသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။” ယေရှုသည် ခမည်းတော်အား ကျွန်ုပ်တို့အား သိစေသော ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက် သောမတ်စ်သည် ယေရှုအား ဘုရားသခင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်– “သောမတ်စ်က၊ အကျွန်ုပ်၏သခင်၊ အကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏” (ယော၊ ၂၀း၂၈)။
ဘိုးဘေးများသည် ကြီးမြတ်သည်ဟု ပေါလုဆိုသည်– “ခရစ်တော်သည် ဇာတိပကတိအတိုင်းကြွလာ၍၊ ထာဝရကောင်းကြီးပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ အာမင်” (ရော. 9,5) ဟေဗြဲလူတို့ထံပေးသောစာတွင် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်က သားတော်ကို “ဘုရားသခင်” ဟုခေါ်ဆိုသည်– “'ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်၏ပလ္လင်သည် နိစ္စထာဝရဖြစ်တော်မူ၏...' (ဟေဗြဲ)။ 1,8).
“အကြောင်းမူကား၊ [ခရစ်တော်] သည် သူ၏အထဲ၌ရှိသော ဘုရားသခင်ဦးခေါင်း၏ အလုံးစုံသော ပြည့်စုံခြင်း၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူ၏” ဟု ပေါလုဆိုသည် (ကော.2,9) ယေရှုခရစ်သည် လုံး၀ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် “ခန္ဓာငါးပါး” ရှိသည်။ သူသည် လူ့ဇာတိခံယူသောဘုရားသခင်၏ တိကျသောပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လူသားသာဖြစ်ပါက ကိုယ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းသည် မှားပေလိမ့်မည်။ ဒါ​ပေမဲ့ သူ​ဟာ ဘုရား​သခင်​ဖြစ်​တဲ့​အတွက်၊ ကျွန်​တော်​တို့​ကို ယုံ​ကြည်​ဖို့ မိန့်မှာ​တယ်။ သူသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်သောကြောင့် ခြွင်းချက်မရှိ ယုံကြည်ထိုက်သူဖြစ်သည်။
သို့သော်“ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏” ဟုပြောခြင်းသည်စကားလုံးနှစ်လုံးကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်တူအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေသည့်အလားမှားယွင်းနိုင်သည်။ တစ်ဖက်တွင်ယေရှုသည်လူသားဖြစ်ခဲ့ပြီးအခြားတစ်ဖက်တွင်မူယေရှုသည်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းမဟုတ်ပါ။ "God = Jesus" ဤညီမျှခြင်းသည်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်။
များသောအားဖြင့်“ ဘုရားသခင်” သည်“ ခမည်းတော်” ကိုဆိုလိုသည်၊ ထို့ကြောင့်သမ္မာကျမ်းစာကယေရှုခရစ်တော်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ သို့သော်သခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုအသုံးအနှုန်းကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချနိုင်သည်။ ဘုရားသခင့်သားတော်အနေနှင့်သူသည်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဘုရားဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးလူသားနှင့်လူသားစပ်ကြားဆက်နွယ်မှုကိုပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက်၊ သခင်ယေရှု၏ဘုရားသခင့်ဘုရားဖြစ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာ သူသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်မှသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား မှန်ကန်စွာထုတ်ဖော်ပြသနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (ယော. 1,18; 14,9) ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခွင့်လွှတ်နိုင်သည်၊ ရွေးနှုတ်နိုင်သည်၊ ဘုရားသခင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြန်လည်သင့်မြတ်စေနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်တစ်ဦးတည်းသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း၏အရာဝတ္တုဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏အကြွင်းမဲ့သစ္စာစောင့်သိတော်မူသောအရှင်၊ သီချင်းဆိုဆုတောင်းခြင်းတို့ကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာနိုင်ပေသည်။
ကိုးကားထားသောကိုးကားချက်များအရ၊ သမ္မာကျမ်းစာ၏“ ယေရှု၏ပုံသဏ္"ာန်” သည်ဓမ္မသစ်တစ်ခုလုံးအပေါ်ကျောက်တုံးများဖြင့်ဖြန့်ဝေထားသည်။ ပုံတသမတ်တည်းဖြစ်သော်လည်းတစ်နေရာတည်းတွင်ရှာ။ မရပါ။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုကန ဦး ဘုရားကျောင်းနှင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာဖွင့်ဟချက်အရသူသည်အောက်ပါကောက်ချက်များကိုကောက်ယူခဲ့သည်။
•ယေရှုသည်လူသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
Nicaea ကောင်စီ (325) သည် သခင်ယေရှု၊ ဘုရားသခင်၏သားတော် နှင့် သူ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ခမည်းတော် (Nicaene Creed) နှင့် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Chalcedon (451) က သူလည်း လူသားတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
“ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်သားတော်တ ဦး တည်းဖြစ်၏။ ဘုရား၌စုံလင်ခြင်း၊ လူသားအတွင်း၌စုံလင်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၌လုံးလုံးလျားလျားစုံလင်ခြင်းနှင့်ရှေးခေတ်အဖထံမှဘုရားအဖြစ်ခံယူခြင်းနှင့် ... လူသားတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အပျိုစင်မာရိထံမှလက်ခံခြင်း၊ တစ်ပါးတည်းသောခရစ်တော်၊ သားတော်၊ သခင်၊ တစ်ပါးတည်းသောသတ္တဝါနှစ်ပါးတွင်ထင်ရှားစေခြင်းအားဖြင့်သမဂ္ဂသည်သဘာဝအားဖြင့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုအဆင့်အတန်းခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသော်လည်းသဘာဝတစ်ခုစီ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးလူတစ် ဦး ထဲ၌ပေါင်းစည်းထားသည်။ "
အချို့သောသူများကဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝကယေရှု၏လူ့သဘောသဘာဝကိုနောက်ခံသို့တွန်းပို့နေသဖြင့်ယေရှုသည်လူအဖြစ်မရှိတော့ဟုအချို့ကဆိုကြသည်။ အချို့ကမူသဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးသည်တတိယသဘောသဘာဝအဖြစ်ပေါင်းစည်းသည်ဟုဆိုကြသည်။ သို့မှသာယေရှုသည်ဘုရားမဟုတ်သလိုလူသားလည်းမဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ပါ၊ ကျမ်းစာအထောက်အထားများကယေရှုသည်လူသားအားလုံးနှင့်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုပြသည်။ ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းကလည်းအဲဒါကိုသင်ပေးရမယ်။
မေးခွန်းကအဓိကအားဖြင့်လူများသည်ယခုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့နေရသောကြောင့်မျှော်လင့်ချက်မဲ့လာဘ်စားနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပုံမဟုတ်ပါ။ လူသားတွေဟာအမှန်တရားမှာဘယ်လိုရှိသင့်တယ်၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖခင်အပေါ်လုံးလုံးမှီခိုအားထားနေသူကိုပြသသည်။ လူသားတွေလိုပဲဒီလိုပဲဖြစ်သင့်တယ်။
ဘုရားသခင်တတ်နိုင်သည့်အရာကိုလည်းပြသသည်။ သူသည်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သည်။ သူသည်မသန့်ရှင်းသောအရာများနှင့်ဖန်ဆင်းခံရသူများအကြား၊ မြင့်မြတ်သောနှင့်အပြစ်ရှိသောသူများအကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေးနိုင်သည်။ အဲဒါကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါတို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင်သည်တတ်နိုင်တော်မူ၏။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်၊ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်တွင် လူသားမျိုးနွယ်သည် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို ယေရှုပြသသည်။ သူပြန်လာပြီး ငါတို့ ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါ ငါတို့က သူနဲ့တူလိမ့်မယ် (1. ဂျို 3,2) ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏အသွင်ပြောင်းသော ခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့ ခန္ဓာကိုယ်ရှိလိမ့်မည် (1. ကော ၁5,42-49) ။
သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့ဆောင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်အားလမ်းပြခြင်းသည်ယေရှုမှတစ်ဆင့် ဦး ဆောင်ကြောင်းပြသသည်။ သူသည်လူသားဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းချက်ကိုခံစားရသည်။ သူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်၏လက်ျာတော်ဘက်၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်ပြောနိုင်သည်။ သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းသည်သေချာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။